I-True Fortune Casino yase Ningizimu Afrika njengamanje - 200% Kufika ku-R30,000!
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-true fortune casino
Isibuyekezo se-True Fortune Casino
Isofthiwe:Rival, Betsoft, Saucify, Tom Horn Gaming, Spinomenal
Ibhonasi Lokukwamukela:200% Webhonasi Yomdlalo Ize Ifike R30,000
20 Izikhathi Zokudlala
Amakhasino ayizindawo lapho kungenziwa khona imali eningi noma kulahleke imali eningi ohideni lwamazinga okuwina. Kodwa-ke, kuningi labadlali, amakhasino anesithembiso semali futhi anganikeza ngokuwina okuphawulekayo, ngaphandle kokunikeza injabulo nokuzijabulisa, okuyilapho singasho khona ukuthi ‘inhlanhla yangempela’ ikhona.
Kwase kuza ikhasino ye-inthanethi ngo-2019 ehambisana naleyo mizwa. I-True Fortune Casino iyinkampane yemidlala yedijithali yamazwe omhlaba enikeza eminye yemidlalo emihle kunayo yonke emhlabeni, kanye nakho konke okungeziwe okunikeza abadlali inzuzo. Isebenzisa isofthiwe yabakhi bemidlalo abafunwa kakhulu njenge-Rival and BetSoft, njll. Ilabhulali yemidlalo ye-True Fortune Casino inemidlalo yezigaba zekhasino ezinjengama-slot, imidlalo yetafula, amakhasino abukhoma, i-poker ye-vidiyo, imidlalo engajwayelekile, nama-jackpot akhula njalo (progressivve jackpots).
Ipulatifomu yokudlala ibukeka ifihlakele ngokwanele. Abadlali babingelelwa nge-crystal ball ephethe amanothi emali nama-chip ekhasino ekusasa lakho. Ikhasi lasekhaya lihle futhi lilula, likukhomba ngqo ezingxenyeni ezibalulekile zekhasino, ngaphandle kokuthi ufune indlela phakathi kwemigqa nangemigqa yezithonjana zemidlalo. Le webhusayithi ikhuluma ngesiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, iSpanish, nesiNtaliyane, futhi ihlanganisa abadlali abavela eNingizimu Afrika, eNingizimu Melika, eMexico nakwezinye izingxenye zomhlaba.
I-True Fortune Casino ikhipha ukhaphethi obomvu wabadlali abasha ngamabhonasi amabili ahlukile okukwamukela kubathandi bama-slot, abadlali abajwayelekile, nabadlali bamakhadi. Amalungu ajwayelekile adlala njalo angazuza kakhulu kukilabhu ye-VIP yekhasino. I-True Fortune Casino idale inkundla yokudlala emnandi, ephephile nenokulingana lapho imidlalo ihlolwa njalo futhi kuqinisekiswe imiphumela ekhishwa ngezikhathi ezithile ngabacwaningi mabhuku abazimele.
Imininingwane yelungu ivikelwe njengoba kuchaziwe ‘Kusitatimende Sobumfihlo’, amalungu amasha akhuthazwa ukuba awafunde ngaphambi kokubhalisa ekhasino. Imininingwane yezezimali igcinwa ivikeleke ngokuqinile ngemuva kwama-SSL-encrypted firewalls. Ikhasino enobungani ne-Bitcoin inosizo lwamakhasimende oluqeqeshiwe futhi oluphendulayo, olutholakala ngocingo, ngexoxo ebukhoma, ne-imeyili. Masibheke ezinye izici ezibaluleke kakhulu zekhasino ngombono wababadlali.
Amakhasino e-True Fortune Ningizimu Afrika
Abantu baseNingizimu Afrika babenezinto ezimbalwa ababengakhetha kuzo kube manje uma kuziwa ekudlaleni ku-inthanethi. Imithetho yezwe ayivumeli amakhasino e-inthanethi ukuthi asebenze ngaphakathi kwemincengele yeNingizimu Afrika. Kodwa-ke, uhulumeni akukho angakwenza ukuvimba izakhamuzi zakhe ekudlaleni emakhasino e-inthanethi ngaphesheya kwemingcele yezwe, njengenkampane ye-iGaming engasolwandle. Kepha zimbalwa izindawo zemidlalo yedijithali ezinakekelwa ikakhulukazi abadlali abavela e-Rainbow Nation ngokwezici zaseNingizimu Afrika.
Kepha konke lokho sekuguqukile ezikhathini zamuva. Amakhasino amaningi athatha ama-Roebucks ngezimpondo zawo futhi awaheha ukuthi adlale kumapulatifomu abo. I-True Fortune Casino ingenye yezinkampane ezingagcini kuphela ngokuhwebelana ngeRandi laseNingizimu Afrika, kodwa futhi inamaphromoshini enzelwe wena ngamanani eRandi. Lokhu kwenza kube lula futhi kusheshe ukudiphozitha nokukhipha, imali ngaphandle kokwenza kube lula futhi kusheshe ukuthatha amaphromoshini.
I-True Fortune Casino ibheke ngenkuthalo abadlali base-Rainbow Nation. Ikhasino inikela ngemidlalo esezingeni eliphakeme etholakala kakhulu kubadlali baseNingizimu Afrika. Izindlela ze-epayment ezihlinzekwe yile ndawo zifaka izindlela eziningana ezenza kube lula kakhulu kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi badiphozithe futhi bakhiphe imali yabo. Ama-Springbok manje anepulatifomu yokudlala ephephe kakhulu kusuka lapho angalandela khona izifiso zawo okudlala,’True Fortunes’.
Amabhonasi okukwamukela e-True Fortune Casino
I-True Fortune ibingelela amalungu amasha ngamaphakheji angu-2 ahlukile okukwamukela anikezwa abathandi bama-slot nabathandi bemidlalo abajwayelekile nabadlali bamakhadi. Isigaba sangaphambili sabadlali sizohlomula ngebhonasi engu-200% elinganayo nediphozithi efinyelela ku-R30,000. Abathandi bemidlalo yamakhadi bangakhetha umshwalense wokubuyiselwa ukheshi ongu-100% emidlalweni yabo yamakhadi abayithandayo. Idiphozithi encane yamabhonasi omabili okukwamukela ingu-R250, ngenkathi inani eliphakeme lingu-R3750. Noma iyiphi ibhonasi yokukwamukela ingafunwa ku-akhawunti kamdlali noma ngokuxhumana nosizo lwamakhasimende.
Izinto okufanele uzigcine engqondweni ngenkathi uthatha iphakeji yediphozithi elinganayo ka-200%:
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zingu-35x ibhonasi + idiphozithi.
Le bhonasi ayinakusetshenziswa emidlalweni yetafula, ye-poker yevidiyo, imidlalo ebukhoma noma ama-slot akhula njalo
Iphromoshini ingavalwa nomayinini ngokwesinqumo sekhasino
Wonke ama-spin amahhala nenqubeko ku-i-slots kuzokhanselwa ekugcineni kwephromoshini
True Fortune Casino Ikhodi Yebhonasi Yediphozithi Engekho
Ngeshwa, i-True Fortune Casino ayinikezeli ngebhonasi yediphozithi Engekho okwamanje.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-True Fortune Casino
Siyaxolisa ukusho ukuthi i-True Fortune Casino ayizamanga uma kuziwa emaphromshini ajwayelekile okwamanje. Ngenkathi le ndawo edijithali ihehe abadlali abaningi ngenxa yeqoqo labo elihle lemidlalo, ukwamukela abadlali abavela ezindaweni ezahlukahlukene, namabhonasi okukwamukela amahle, kukhona ukudumala ngokuntuleka kokunikezwa kwamabhonasi njalo kumalungu akhona.
Ngemuva kokusho lokho, ukungabi khona kwamaphromoshini kusho ukuthi akukho ukuphazamiseka ngezidingo zokubheja; abadlali bangakhululeka ukudlala futhi bakhiphe abakuwinile ngendlela abayifunayo. Ngakolunye uhlangothi, i-True Fortune Casino isanda kungena embonini, futhi u-2020 bekungunyaka ongemuhle. Kungenzeka ukuthi kukhishwe njalo amaphromoshini esikhathini esizayo esiseduze, noma kunjalo, inyoni esandleni ilingana nezimbili ehlathini. Kodwa-ke, amaphromoshini akufanele abe yisici esinqumayo ukukhetha indawo yokudlala ekhangayo.
Amaphromoshini atholakala e-True Fortune Casino wuhlelo oluklomelisa abathembekile nekilabhu ye-VIP ekhethekile. Ikhasino iphatha abadlali bayo abathembekile njengamakhosi, kepha nawe kumele udlala njengabo, cishe njengabo. Amalungu angathola amaphoyinti okuthembeka, abizwa nge-comp points, ngazo zonke izikhathi bebheja. Ama-comp points angabuye asetshenziselwe ezinye izinzuzo noma imali. Endleleni, ungaqoqa amaphoyinti anele ukuze ujoyine Ikilabhu ye-VIP.
Lapho ubheja imali eningi ngasikhathi sinye, noma ubheja izikhathi eziningi, uthola amaphoyinti okuthembeka athe xaxa ongawaqoqa ohambweni lwakho ngezinyathelo Zekilabhu ye-VIP. Ikilabhu ye-VIP inamazinga angu-6, futhi ukuze ufinyelele kuwo wonke amazinga, kufanele uqoqe inani elithile lamaphoyinti okuthembeka. Kufanele ube namaphoyinti angu-500, u-2,500, u-5,000, u-25,000, kanye nangu-50,000 ukuze ukhuphuke ngezigaba eziyi-Blue, Blue Plus, Bronze, Silver, Gold, ne-Diamond ngokulandelana.
Izinga ngalinye liletha imivuzo yalo, kepha i-True Fortune Casino ibeka wonke amalungu ayo e-VIP kusisekelo. Imivuzo ye-VIP ibandakanya, kodwa ayigcini kuphela:
Amaphromoshini akhethekile ansuku zonke
Ukubuyiselwa kwekhesi masonto onke nanyanga zonke
Umphathi wekhasino ozinikezele
Ukudlala mahhala ngeSonto
Imivuzo ekhethekile ngezikhathi ezikhethekile
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-True Fortune Casino
Ukuvula i-akhawunti e-True Fortune Casino kuyizinyathelo ezimbalwa ezilula, ezibandakanya ukufaka imininingwane yakho, nemali oyikhethayo. Lolu lwazi lwenza ikhasino ikwazi, ikuthumele izaziso ezibalulekile, futhi ikukhokhele. Imininingwane yakho yomuntu siqu iyimfihlo ngokuphelele futhi isetshenziswa kuphela ngokwenqubomgomo yobumfihlo yekhasino, etholakala kubo bonke abantu ukuze ibonwe yibo bonke.
Ngena kuwebhusayithi yekhasino
Chofoza uu-‘Joyina’ phezulu ngakwesokudla ekhasini lasekhaya
Uzobuzwa ukuthi ngabe ufuna ukudlala ukuzijabulisa noma okwangempela. Ngaphandle kokukhetha kwakho, uzocelwa ukuthi ungene ngemvume noma ubhalise. Chofozau’Bhalisa’
Faka i-ID yakho ye-imeyili bese ukhetha igama lomsebenzisi nephasiwedi kufomu lokuqala
Chofoza lapho okuthi-‘Okulandelayo’ ukuze uqhubeke
Kufomu lesibili faka isihloko sakho, igama nesibongo, khetha usuku lwakho lokuzalwa, bese ufaka inombolo yakho yocingo nekhodi lezwe Phinda uchofoze lapho okuthi-‘Okulandelayo’
Kufomu lesithathu, faka ikheli lakho lomgwaqo, idolobha, ikhodi ye-zip, bese ukhetha izwe lakho
Khetha imali oyithandayo
Faka umbuzo nempendulo yawo. Uzobuzwa uma ulahlekelwa yiphasiwedi yakho
Chofoza inkinobho ethi-‘Okulandelayo’
Halala! Manje usuyingxenye esemthethweni yomphakathi we-True Fortune Casino futhi ungafaka ibhonasi yokukwamukela yakho. Manje usungadlala,udiphozithe futhi unqobe ngeRandi laseNingizimu Afrika.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi wena Ongayidlala e-True Fortune Casino
I-True Fortune Casino inemidlalo engu-500 ezigabeni ezahlukahlukene zekhasino. Yize leli kungelona iqoqo elikhulu, limele eminye yemidlalo engcono kakhulu embonini. Kunabahlinzeki besofthiwe abane kuphela: i-Rival, i-BetSoft, i-Saucify, ne-Vivo Gaming, kepha laba bahlinzeki besofthiwe abahamba phambili emhlabeni balethe ukhilimu wamaphothifoliyo abo emidlalo. I-Rival iyona enemidlalo eminingi kulabhulali yemidlalo. Ama-i-slots abo aheha kakhulu, ngenkathi i-BetSoft igubha ama-reel e-3D anikeza ukuzijabulisa okuhlukile.
Ilabhulali yemidlalo engu-500+ ingabukeka ingaxinekile ngokuqabulayo. Ngenxa yalokhu, i-True Fortune Casino inepulatifomu elula yokudlala engatholakala kusixhumanisi esithi-‘Imidlalo’ ngakwesokunxele phezulu kwekhasi lasekhaya. Izigaba ezahlukahlukene zekhasino zivuleke iminyango endaweni yokwamukela izivakashi eyinhloko, lapho ungathola khona ilabhulali yonke. Ungasesha imidlalo ekhasini le-akhawunti yakho, noma ungaskena izithonjana eziklanywe ngokuhlukile, zemidlalo esigabeni ngasinye. Yonke imidlalo ingaqala idlalwe kumodi yedemo, uze uqiniseke ukuthi ufuna ukufaka imali yakho kuyo.
Ama-slot ngokuba isigaba esithandwa kakhulu sekhasino, uzothola ukuthi lesi yisigaba esikhulu kunazo zonke e-True Fortune Casino, njenganoma iyiphi enye indawo. Isigaba ngokwaso sihlukaniswe ngobunono saba ama-slot akudala, ama-slot evidiyo, ama-i-slots, ama-3D slot, nama slot e-jackpot ekhula njalo (progressive jackpot). Uzothola zonke izingqikithi zakho eziyizintandokazi ezifana nezinganekwane, ukuzilibazisa, ukuzijabulisa, izilwane, imishini yezithelo, nama-reels agubha i-pop culture ehamba phambili, ngaphandle kwezinye izihloko.
Ama-slot adumile ekhasino abandakanya i-Arabian Tales, i-Day at the Derby, i-Whale O ‘ >Winnings, i-Astral Luck, i-Cream of the Crop, i-Atomic Age, Diggin ‘Deep, i-Grandma ‘ s Attic, i-Fantasy Fortune, i-Big Cash Win, i-A Switch in Time, i-Dr. Jekyll Mr. Hyde, ne-Fruit Zen, njll.
Kuyavunywa, i-True Fortune Casino ayinkulu kakhulu emidlalweni yetafula, nokho uzothola yonke imidlalo yamakhadi ethandwayo njenge-blackjack, i-baccarat, i-poker, njll. Noma kunjalo, kufanele kushiwo ukuthi labo abathembele kumakhono abo okudlala, kanye nesabelo sabo esifanele senhlanhla abadingi izinhlobo eziningi kakhulu ukudlala nokunqoba emidlalweni abayithandayo. Eqinisweni, abadlali abaningi bamakhadi banethezekile ngezinhlobo ezithile. Akumangalisi, yingakho bevame ukuthi abadlali bekhasino bangempela batholakala ematafuleni.
Kunemidlalo yamakhadi eyisishiyagalombili e-True Fortune Casino: imidlalo ejwayelekile ye-blackjack ne-baccarat, i-Blackjack Insurance, i-Red Dog, i-Pai Gow Poker, i-War, i-Craps, ne-3 Card Poker. Sibone kuphela i-American Roulette ngemuva kokungena ngemvume ku-akhawunti.
Imidlalo ye-poker yevidiyo yaqhamuka enkundleni yemidlalo ngama-1970s phakathi kokuqhuma kwemidlalo yevidiyo. Ngokuhlanganisa izici ze-slot ne-poker yakudala, lolu hlobo lwemidlalo lwaluyinto ethandwayo ngoba luvumela abadlali abanamakhono e-poker anganele ukuthi badlale uhlobo oluthile lomdlalo. Vele, amathuba okuwina aphansi ekhasino engeza kuphela ekuheheni. Futhi uma uzimisele ngokwanele ukudlala izinhlobo zezandla eziningi (multi-hand), ungawina okuhle kakhulu.
Abadlali bangase badumazeke ngenani elincane lamavidiyo e-poker ekhasino, u-7 ngqo, kepha yonke kungadlalwa ngezandla ezizodwa (single hands) noma ngezandla eziningi (multi-hands). Izinhlobo zibandakanya i-Deuces and Joker, i-Pyramid Aces & Faces, i-Deuces Wild, i-Jacks or Better, i-Double Joker, i-Joker Poker, ne-Tens or Better.
Imidlalo Yasekhasino Ebukhona?
Namuhla, imidlalo yasekhasino ebukhoma isiyisigaba esijwayelekile emakhasino e-inthanethi amaningi, iqiniso, ebelingabonakali onyakeni odlule. Ubuchwepheshe bemidlalo ebukhoma kanye nesivinini sokusakaza kube nenguquko enkulu. Ungadlala imidlalo yakho oyithandayo nabadlali bangempela kepha abakude, ngamakhadi angempela aphathwe bukhoma, ama-croupiers amahle ongaxoxa nawo. Ngokusakaza ngejubane elikhulu, imidlalo yothando yanamuhla ingakunika isipiliyoni sekhasino yangempela.
Ngeshwa njengamanje, inani lemidlalo ebukhoma ekhona e-True Fortune Casino alitshengisi lolo thando nokwanda kokuthandwa kwesigaba. Kunemidlalo ebukhoma engu-5 kuphela futhi iqukethe i-blackjack, i-baccarat, i-roulette, i-craps, ne-Caribbean Stud Poker.
Imidlalo ekhethekile noma imidlalo engajwayelekile idlalwa ngokwesiko emicimbini yokuzijabulisa nasemibuthanweni yomndeni. Idlalwa ngemali ephansi, imidlalo yakhona idlalelwa ikakhulukazi ukuzijabulisa nokuxhumana ngaphandle kokugembula kwangempela. Amakhasino e-inthanethi asesebenzisa imidlalo engajwayelekile futhi awenze acisha aba yisigaba esijwayelekile.
Amakhasino athola isigaba esisha sabadlali sokukhanga futhi abadlali bathola amathuba amaningi okudlala imidlalo, ebidlalwa nabantu abaphilayo ekuqaleni. Isigaba semidlalo ekhethekile e-True Fortune Casino sinemidlalo engu-12. Kubandakanya i-bingo yase-Europe neyase-America, i-keno, i-Cavalier Cash, i-Beach Bums, i-Gunslinger’s Gold, i-Tiki Treasure, i-Penguin’s Payday, i-Sudoku, i-Cast for Cash, kanye ne-Pirate’s Pillage, njll.
Ama-jackpot Akhula Njalo (Progressive Jackpots)?
Indawo yama-jackpot yale khasino incane uma uyiqhathanisa namanye amakhasino, yize onjiniyela abangabalingani banamanethiwekhi abanzi ama-jackpot akhula njalo omhlaba wonke. Noma kunjalo, uma ama-jackpot eyinto yakho, kulapho eyakho inhlanhla yangempela ingenziwa. Indawo yokwamukela izivakashi iqukethe inhlanganisela yama-jackpot akhula njalo asekhaya nawomhlaba wonke. Awomhlaba wonke avame ukufika kuzibalo ezingu-4, 5, kanye no-6. Kepha, ungabona kuphela inani lama-jackopot akhula njalo ngemuva kokuthi elayishiwe. Ungakhetha:
I-Jackpot 5x Wins
I-1,000,000 Reels B.C.
Ingabe i-True Fortune Casino Iyatholakala Yini Kuselula?
Siphila emhlabeni weselula-kuqala kuyo yonke into. Abadlali bakhetha ukwenza ukudlala amageyimu abo behamba, futhi kuyinto ejwayelekile kumakhasino e-inthanethi ukuhlela amapulatifomu abo ukuthi adlala ngeselula. I-True Fortune Casino iyahambisana nawo wonke ama-smartphone nama-tablet asebenza i-Android, i-iOS, i-Windows Phone, i-Blackberry, kanye namanye amasofthiwe eselula. Udinga nje ukuqinisekisa okulandelayo:
I-smartphone noma i-tablet yakho kufanele ibe nesiphequluli se-Chrome ye-Windows Phone nezingcingo ze-Android noma se-Safari ye-iOS noma i-Blackberry
Ukuxhumana kwe-inthanethi okuzinzile nomaphi lapho odlala khona nge-4G noma i-broadband Wi-Fi ukuze ube nesipiliyoni esihle
Amadivayisi akamuva, angathola izibuyekezo zokuphepha ezivamile, ayathandeka, kodwa amadivayisi amadala angavula ikhasino.
Amanye amakhasino eselula ayizinguqulo ezincanyana zamapulatifomu e-PC kodwa ungena imihlaba ehlukene e-True Fortune mobile casino. Unezinto ezimbili ongazikhetha: Ikhasino Yeselula ne-Khasino Eshashayo (Instant Casino), lapho imidlalo ingadlalwa khona ngendlela ehlukile. Ngokuphikisana nenguqulo ye-PC, imidlalo yeselula ikunikeza imininingwane eningiliziwe ngayo. Chofoze ku-‘Dlala’ bese uqondiswa kabusha ekhasini lasekhaya lekhasino yeselula, lapho ungabhalisa khona noma ungene ngemvume.
Izici zokuphatha nezokubhenka zitholakala kalula nakukhasino yeselula. Kungaba nemikhawulo ethile uma kuziwa ekudlaleni ngeselula. Iziphequluli zesimanje ngeke zisekele ubuchwepheshe be-Flash. Imidlalo yamaselula yakhiwe ngekhodi ye-HTML5 futhi ungakhetha kumidlalo eminingi yeselula e-True Fortune Casino. Nasi isampula elincane lemidlalo ongayidlala ngenkathi uhamba:
I-Milk the Cash Cow
I-Scary Rich 1, 2 and 3
Ngingayidawuniloda Yini i-True Fortune Casino Kuselula Yami?
Sezadlula izinsuku zamakhasino adawunilodekayo, lapho ongadlala ngemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi; kube nezinkinga eziningi kakhulu ngendawo yestoreji. Amakhasino awasakhiqizi izinhlobo ezidawunilodekayo, futhi zingafinyelelwa ku-inthanethi kuphela. Abadlali manje sebekhetha ukudlala ku-inthanethi bukhoma.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e- True Fortune Casino
Skrill Yebo Emahoreni angu-24
Neteller Yebo Emahoreni angu-24
EcoPayz Yebo Emahoreni angu-24
Paysafecard Yebo Emahoreni angu-24
Neosurf Yebo Emahoreni angu-24
Postpay Yebo Izinsuku 2-4
Wire Transfer Yebo Izinsuku 4-7
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha imali e-True Fortune Casino
Imininingwane Evamile e-True Fortune Casino
Isungulwe: 2019 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: TrueBet Affiliates Umphathi ngu: TrueBet Affiliates I-imeyili: [email protected]
Uhlobo Ongaludawuniloda: Cha Usizo lwe-24/7 356: Cha
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: www.true-fortune.com
Ubuhle Nobubi be-True Fortune Casino
Iqoqo elikhulu lemidlalo esezingeni eliphakeme
Ilabhulali yemidlalo yabaholi bemboni
Iyamukela abadlali abavela eNingizimu Afrika
Iyamukela futhi ikhokha ngeRandi lase-SA
Ifaka imidlalo ebukhoma nama-jackpot akhula njalo (progressives)
Uhlelo oluhle lwamakhasimende athembekile nolwe-VIP
Isipiliyoni semidlalo yeselula esimnandi
Awekho amaphromoshini namabhonasi akhishwa izikhathi eziningi
Yini Eyenza Ukuthi I-True Fortune Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-True Fortune Casino ayamukeli kuphela abadlali abavela eNingizimu Afrika, inezici eziningana ezenzelwe abadlali abavela e-Rainbow Nation. Ikhasino inelayisense futhi inikela ngendawo ephephile, ejabulisayo kanye nenemidlalo elinganayo. Izinzuzo ezinkulu kubantu baseNingizimu Afrika zibandakanya:
Iyamukela abadlali base-Rainbow Nation
Ibhonasi yokukwamukela enhle ngeRandi lase-SA
Iqoqo elikhulu lemidlalo esezingeni eliphakeme evela ku-Rival ne-Betsoft
Imidlalo ebukhoma nama-jackpot akhula njalo (progressives)
Imidlalo itholakala ezindaweni eziningi eNingizimu Afrika
Izindlela zokukhokha ezilungele amaSpringboks
Izikhalo nge-True Fortune Casino Ningizimu Afrika
I-True Fortune Casino ibingakabi sebhizinisini isikhathi eside ngokwanele ukuthi ingabhalisa noma yiziphi izikhalazo ezimangalisayo. Ngamakhasino edijithali, udinga okungenani iminyaka engu-2-3 ukunquma ubuqiniso bawo nezinqubomgomo zokusebenza. I-True Fortune Casino inezinkomba ezinhle kuphela kulezi zici.
Iyikhasino enelayisense ebambisene nabahamba phambili uma kuziwa emidlalweni, emapulatifomeni abo esofthiwe, kanye nabalingani bokukhokha. Asikaziboni izikhalazo ezivela kumalungu noma abanye abantu kuze kube manje. Izinto zingashintsha ngokuzayo, futhi ungaqiniseka ukuthi sizokutshela uma kunezinkinga ngale ndawo.
Ingabe i-True Fortune Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Amakhasino e-inthanethi awekho emthethweni eNingizimu Afrika. Imithetho yezwe ayiwavumeli amakhasino e-inthanethi ngaphakathi kwemingcele yakuleli. Kodwa-ke, uhulumeni akakwazi ukwenza okuningi ngezindawo zokudlala ezidijithali ezingasolwandle ngoba zisebenza endaweni ye-cyber. Amakhasino e-inthanethi akhululekile ukuhlinzeka ngamasevisi awo kubadlali abavela kunoma yiliphi izwe kubandakanya iNingizimu Afrika. Ngaphandle kwalokho, iziphathimandla zaseNingizimu Afrika azihlaseli abadlali abasebenzisa lawo masevisi.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-True Fortune Casino?
Kuzofanele ufake isicelo sokukhipha imali ukuze uzuze lokho okuwinile, kepha udinga ukubheka okulandelayo ngaphambi kokufaka isicelo:
Kufanele ube nemali ku-akhawunti yakho yekhasino, engaphezulu komkhawulo omncane wokukhipha imali
Awunazo izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ezingagcwaliswanga
Uma wenza isicelo sokukhipha imali ngaphambi kokufeza izibopho zakho zokudlala, ikhasino ayisoze yasiphendula isicelo sakho, noma izochitha okuwinile uma kubi kakhulu. Amalungu adlala ngamabhonasi kufanele abeke ihlo likaklebe kuzidingo zabo zokubheja ukuze bakhiphe imali.
Ikhasino ingakucela amadokhumenti okuqinisekisa ubunikazi ngokwezinkambiso ze-KYC. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngaphambi kokukhipha imali kwakho kokuqala. Kukuwe ukuthi uthumele ubufakazi bokuthi ungubani kanye nekheli. Lapho-ke, uma konke kuhamba kahle, ukwenza isicelo sokukhipha imali kulula:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho bese uya ‘kukheshiya’
Khetha indlela yakho yokukhokhwa oyithandayo ku- ‘Khipha Imali’
Faka imali ofisa ukuyikhipha
Yini i-True Fortune Casino
I-True Fortune Casino iyindawo ye-iGaming noma ikhasino ye-inthanethi, enikezwe ilayisense nguhulumeni waseCuracao. Ilayisensi ivumela ikhasino ukuthi yenze imisebenzi yemidlalo yasekhasino futhi inikele ngamasevisi ayo kubadlali ezizweni zonke. Ikhasino iyamukela abadlali baseNingizimu Afrika.
I-True Fortune Casino inikeza imidlalo esezingeni eliphakeme evela kubakhi besofthiwe abadume umhlaba wonke ezigabeni zemidlalo ezinjengama-slot, ama-jackpot akhula njalo, imidlalo yetafula, i-poker yevidiyo, imidlalo yekhasino ebukhoma nemidlalo ejwayelekile. Ikhasino inikeza le midlalo ngepulatifomu yamadivayisi amaningi.
Ubani umnikazi/ophethe i-True Fortune Casino?
Ikhasino iphethwe yi-TrueBetAffiliates, futhi inelayisense lokudlala elikhishwe nguhulumeni waseCuracao.
Ingabe i-True Fortune Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Cha, i-True Fortune casino ayinayo i-sportsbook noma ukubhejela ezemidlalo yedijithali njengamanje.
Iphephe Kangakanani i-True Fortune Casino?
I-True Fortune Casino iyikhasino enelayisense enazo zonke izivumelwano nezici zokuphepha. Ikhasino inikeza indawo yokudlala evikeleke kakhulu, ejabulisayo nenobulungiswa, lapho abadlali bangagxila ekujabuleleni kwabo imidlalo futhi bawine amathuba. Ikhasino inezici ezilandelayo:
Iyibhizinisi elisemthethweni elinelayisense yokudlala yeCuracao
Ama-opharetha aziwa kakhulu embonini
Imidlalo ihlolwe njalo ukuthola imiphumela ye-RNG
Imininingwane yomdlali ivikelwe ngemuva kobuchwepheshe be-SSL
Inikeza ama-e-payment athandwayo naphephile